मोदीको स्वागतमा दुहली जस्तै श्रृंगारिएको जनकपुर (फोटोफिचर) , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मोदीको स्वागतमा दुहली जस्तै श्रृंगारिएको जनकपुर (फोटोफिचर)
डिसी नेपाल , २७ बैशाख २०७५
जनकपुर। हिलाम्मे र धुलाम्मे जनकपुरको मुख्य सडक यतिबेला टलक्कै टल्लिएका छन्। वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त बनेका मुख्य चोक तथा बजारले नयाँ स्वरुप पाएको छ। यो कुनै लामोसमयको योजना होइन। यो त रातारात फेरिएको जनकपुरको स्वरुप हो।
निकै छोटो समयमा नै यतिबेला जनकपुरमा मुख्य बजार क्षेत्रले आफ्नो मुहार फेरेको छ। नफेरोस पनि किन ? यतिबेला सिंगो जनकपुर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न तयार र आतुर छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणको पहिलो दिन सधै जनकपुर आउने भएपछि यतिबेला जनकपुरलाई दुहली जस्तै श्रृंगारिएको छ।
जनकपुरका मुख्य चोक र बजारमा सरसफाइले तीव्रता पाएको छ भने तीव्रगतिमा विकास निर्माणका काम पनि भइरहेका छन्। मोदीको स्वागतका लागि धेरै ठाउँमा स्वागतद्वार बनाइएको छ। मोदीको स्वागतका लागि तुल, ब्यानर, प्रचार रङरोगनले जनकपुरको मुख्य चोक रामानन्द आसपास हुँदै जानकी मन्दिर रहेको क्षेत्र जानकी चोकसम्म निकै साजसज्जा गरिएको छ।